Ny marika manokana amin'ny media sosialy no marketing tsy mendrika indrindra misy | Martech Zone
Asabotsy, Septambra 17, 2016 Asabotsy, Septambra 17, 2016 Douglas Karr
Adinoy ny doka momba ny sakafo sy ny mampiaraka; Heveriko fa ny sasany amin'ny varotra mamitaka indrindra amin'ny Internet dia ireo tena manam-pahaizana momba ny varotra izay manohy mitsikera ny marika sy mitory mangarahara amin'ny Internet.
Tsy misy mangarahara izy ireo.
Amin'ny fotoana mahaliana amin'ny fiainako aho. Mandeha tsara ny orinasako, mahafinaritra ny fiainako manokana, ary mihasalama ny fahasalamako isam-bolana. Izany dia nilaza fa mbola manana fanamby goavana ny orinasantsika sy ny fiainako manokana. Ataoko vazivazy fa, izao dia nanomboka orinasa vitsivitsy aho tsy azo iasana, Tsy hiverina amin'ny asa maharitra intsony aho. Noho izany dia tsy mila manao masquerade aho ary mitazona marika tonga lafatra amin'ny Internet.
Tamin'ny volana lasa dia nifampiresaka tamina olona vitsivitsy aho izay nanasongadinan'izy ireo ny resako an-tserasera. Ao amin'ny Facebook, miresaka sy miady hevitra momba ny politika sy ny fivavahana aho amin'ny horohoroan'ny maro. Izaho dia nanana olona vitsivitsy tao amin'ny indostria nanaraka ahy tamin'ny fanamarihana nataoko na lahatsoratra nozaraiko. Ny olona tsy mitovy hevitra amiko dia milaza amiko fa mandratra ny orinasako amin'ny firesahana momba ny basy, Andriamanitra ary ny politika aho. Ny olona manao izany manaiky miaraka amiko mangingina ahy hanaraka ahy ary misaotra ahy noho ny fampidiran-dresaka… na dia tsy sahin'izy ireo aza ny manome hevitra momba ireo tantara zaraiko.
Matetika aho mizara amin'ny olon-droa fa nanana fitaizana hafa aho. Lehibe katolika romana aho, fa ny antsasaky ny fianakaviako dia jiosy. Ny raiko dia mpandala ny nentin-drazana, mpandala ny nentin-drazana, tia tanindrazana… fa ny reniko dia frantsay-kanadiana miaraka amin'ny fianakaviana liberaly eropeana. Nampahery ahy ny hiteny sy hiady hevitra. Ary ny fanajana ny hevitry ny hafa dia notakiana tamin'ny lafiny roa tamin'ny fianakaviako.
Na fitahiana na ozona izany. Lehibe aho, tsy natahotra ny fifanatrehana tamim-panajana mihitsy. Nahatonga ahy hanana olana kely izany tany amin'ny lisea. Taorian'ny nahazoako diplaoma dia nampianatra ahy fifehezana sy fanajana ny firotsahana ho tafika an-dranomasina. Rehefa niditra ho mpiasan'ny mpiasa aho dia notarihin'ireo mpitarika izay namporisika ny fizakan-tena sy ny andraikitra manokana. Ampio izany rehetra izany, ary manjary misy afo mirehitra. Voadika amin'ny fanatrehako an-tserasera izany.
Ampy ahy. Mampihomehy, izany dia peeve biby ho an'ny mpitarika indostrialy maro amin'ny Internet. Ny fizaran'izy ireo tsy misy farany ny fiainany tonga lafatra dia miteraka ahy.
Angamba ny toe-draharaha politika mampisara-bazana antsika no nanampy ny tsy fahamarinana amin'ny Internet, saingy heveriko fa mahatsiravina izany. Tsy vitan'ny hoe bullcrap tsotra fotsiny izany, fa handeha ihany koa aho hilazana fa sady tsy fanarahan-dalàna no mampidi-doza aza. Angamba ny fivavahanao sy ny politikanao dia anao manokana fa tsy zavatra tianao hampahafantarina azy; Azoko hajaina izany. Fa ny tsy azoko hajaina dia ny ony tsy manam-petra amin'ny fomba lavorary ny fiainanao sy ny mampino ny orinasanao.
Azonao an-tsaina ve ny maha olona miasa amin'ny fivoaranao manokana sy ny maha-matihanina anao, ary ny zavatra hitanao amin'ny Internet dia ireo olona tadiavinao fa tsy mitolona amin'ny Internet mihitsy? Toa tsy hahakivy ahy izany. Mino aho fa samy mahomby kokoa amin'ny lafiny manokana sy matihanina noho ny ankamaroan'ireto olona ireto aho - saingy tsy ho fantatrao izany amin'ny fampitahana ny mombamomba anay amin'ny Internet. Angamba izany dia satria refesiko amin'ny habetsaky ny olona ampiako ny fahombiazako fa tsy ny morontsiraka izay ipetrahako.
Ary noho ny antony hafahafa, ny fahamarinako amin'ny Internet dia hita fa manimba ny marika manokana ataon'ny ankamaroan'ny orinasako. Ilay indostria mihitsy izay manamafy ny teny toa azy mangarahara ary manao ny marina. Na inona na inona izy ireo fa.
Nandritra ny taona maro dia nanaraka olona an-jatony tao amin'ny orinasako aho, ary misy vitsivitsy voafantina izay tohizako. Mizara ny tolona ara-pahasalamany manokana izy ireo indraindray. Mizara ny tolona ara-pahasalamany sy ny fanovana izy ireo. Ary mizara ny fanambin'ny orinasany izy ireo. Amporisihiko izy ireo ary manome aingam-panahy ahy ho tonga olona tsara kokoa, mpitarika tsara kokoa, ray tsara kokoa ary olona mpandraharaha tsaratsara kokoa.
Ahoana ny fomba hahamarina bebe kokoa amin'ny Internet
Gaga aho fa manoratra ireo teny ireo akory, saingy mino aho fa ilaina izany. Ity ny zavatra tiako ho hita raha ataon'ny mpitarika marketing miaraka amin'ny fisian'izy ireo an-tserasera:
manaiky ny fahalemeny sy ny olana atrehiny. Manana azy rehetra isika, ary mampientam-po rehefa mizara ny azy ilay olona tadiavinao.
Anontanio fanampiana. Mila fanampiana daholo ny rehetra, miala amin'ny fiezahana mody hoe manana ny valiny rehetra ianao.
Share ny spotlight bebe kokoa. Miaraka amin'ny mpijery sy mahatratra ireto mpanafika ireto, ahoana no tsy mampino rehefa manaiky izy ireo fa mitolona hisarika ny saina amin'ny Internet?
aingam-panahy ny hafa afaka mahavita ny zava-bitao. Nandresy ny zava-tsarotra rehetra isika mba hahatongavana amin'ny toerana misy antsika, mizara ny fomba nahatongavanao tany amin'ny misy anao dia ampahafantaro azy ireo fa afaka manao izany koa izy ireo.
Ny media sosialy dia manolotra an'io fotoana tsy mampino hananganana fifandraisana olona amin'ny Internet io. Tsy misy olombelona hafa noho ny fanetren-tena, ny tsy fahombiazana, ny fanavotana ary ny fahalemena, sa tsy izany? Mety tsy manana mpanaraka betsaka tahaka ny ataon'ny hafa ao amin'ny orinasako aho, fa afaka manome toky anao aho fa manana fifandraisana lalindalina kokoa amin'ireo olona manaraka ahy aho.
Azo antoka fa afaka mamorona persona sandoka aho, mizara ny fahombiazan'ny orinasantsika ihany ary mahasarika mpanaraka maro hafa. Fa aleoko ny tena fifandraisana novolavolako nandritra ny taona maro fa tsy manosika lainga tsy tratra.
Tags: marika manokanaSocial Media Marketing
Sep 18, 2016 amin'ny 9: 10 AM
Tsy tompon'ny orinasa aho ka tsy mihatra amiko mivantana ny ankamaroan'ny zavatra lazainao. Ary, tsy ao amin'ny media sosialy aho. (Manoratra lahatsoratra momba ny raharaham-barotra ho an'ny namana sy ny fianakaviana aho, noho izany ny nahitako ny tranokalanao teo am-pikarohana.) Na izany aza, tena nankafiziko ny lahatsoratrao – tsy heveriko fa nahita zavatra tena marina aho taloha. Tsara ny mahita tompona orinasa mahomby mitazona azy io ho tena izy, koa misaotra anao.
19 Septambra 2016 à 3:33
Misaotra betsaka, Rita!
19 Septambra 2016 à 6:47
Izaho dia olona ara-panahy manana traikefa amin'ny maha-olombelona…mmmm. Izaho …eh MANAMPY ny olona hiaina ny fiainany amin'ny fomba feno… sady manome antoka fa hanampy ny hafa izy ireo rehefa mihalehibe isika…
Lahatsoratra manjelanjelatra ..saingy mpihatsaravelatsihy ve ianao…raha mianiana aho ….misy boaty pop-up tonga teo aho segondra vitsy lasa izay…ka..ENY.amin'ny fanajana…..hiandry aho hahita ny valinteninao sy izy ireo angamba isika mety misy resaka...
19 Septambra 2016 à 9:48
Eny, tsy azoko antoka hoe inona no ifandraisan'ny boaty pop-up amin'ny maha-marina ahy amin'ny media sosialy. Ampahafantaro ahy azafady.